Maanta, agaasimaha Caafimaadka Degmada Siouxland | KWIT
Nooca cusubi wuxuu umuuqdaa mid faafa badan wuxuuna sababi karaa jirro daran.
Dhanka kale, Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu ku dhawaaqay seddex xarumood oo tallaal oo cusub oo loogu talagalay Xarunta Dhacdooyinka Tyson ee deganayaasha Gobolka Woodbury. Rugaha caafimaad waxay dhici doonaan 25-ka Maarso, 29-ka, iyo 30-ka waxaana la ballaarin doonaa oo lagu darayaa dadka jira 16 iyo kuwa ka weyn oo leh xaalado hoose oo ay go'aamisay CDC. Balanku waxay ka furmi doonaan Khamiista 3da galabnimo waaxda caafimaadka siouxlanddistricthealth.org ama waxaa lagu sameyn karaa taleefan adoo wacaya (712) 234-3922.
Maanta, Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa websaydhkeeda waxay muujisay in ka badan 413,000 Iowans ay hadda si buuxda uga tallaalayaan COVID-19. Waxaa jiray hal dhimasho oo dheeraad ah iyo in kabadan 400 oo kiisas cusub.
Guddiga Regents-ka ee South Dakota ayaa sheegay in lixda jaamacadood ee dowliga ah ay qorsheynayaan dib ugu laabashada howlahoodii caadiga ahaa xilligan dayrta. Maamulaha guud ee gudiga ayaa sheegay in talaalada hada la heli karo ee tacliinta sare iyo goobaha loo yaqaan 'K-12', ay jaamacaduhu rajaynayaan howlo caadi ah oo soo socda. Tallaabadan waxaa ka mid ah Jaamacadda Koonfurta Dakota ee Vermillion.